ဟဒီးဆ်: အရာငါးခုသည် လူသား၏ သဘာဝအနက်မှ ဖြစ်သည်။ (၁)ခသ်နဟ် လိင်အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်း၊ (၂)ချက်အောက်မွေးရိတ်ခြင်း၊ (၃)နှုတ်ခမ်းမွေးညှပ်ခြင်း၊ (၄)လက်သည်း၊ခြေသည်းညှပ်ခြင်း၊ (၅)ချိုင်းမွေးနုတ်ခြင်း။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အရာငါးခုသည် လူသား၏ သဘာဝအနက်မှ ဖြစ်သည်။ (၁)ခသ်နဟ် လိင်အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်း၊ (၂)ချက်အောက်မွေးရိတ်ခြင်း၊ (၃)နှုတ်ခမ်းမွေးညှပ်ခြင်း၊ (၄)လက်သည်း၊ခြေသည်းညှပ်ခြင်း၊ (၅)ချိုင်းမွေးနုတ်ခြင်း။
အမျိုးအစား: ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု။ . အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ စွန္နသ်တော်များ။ .
အဗူဟုရိုင်ရဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)ထံမှ ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ အရာငါးခုသည် လူသား၏ သဘာဝအနက်မှဖြစ်သည်။ (၁)ခသ်နဟ် လိင်အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်း၊ (၂)ချက်အောက်မွေးရိတ်ခြင်း၊ (၃)နှုတ်ခမ်းမွေးညှပ်ခြင်း၊ (၄)လက်သည်း၊ခြေသည်းညှပ်ခြင်း၊ (၅)ချိုင်းမွေးနုတ်ခြင်း။
အဗူဟုရိုင်ရဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)ထံမှ ကြားသိခဲ့ရသည်ကို ပြောပြသည်မှာ အကျင့်ငါးခုသည် အစ္စလာမ်သာသနာ အနက်မှဖြစ်ပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် လူသားများကိုထိုသာသနာပေါ်တွင် ဖန်ဆင်းထားသည်။ အကြင်သူသည် ထိုလုပ်ရပ်တို့အားကျင့်ဆောင်ခဲ့သော် ၎င်းသည် စစ်မှန်သည့်သာသနာ၏ ကြီးကျယ်လှသော အကျင့်အမူများကို ကျင့်ဆောင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤဟဒီးဆ်တွင်တင်ပြထားသောအချက်ငါးချက်သည် အစ္စလာမ်ကယူဆောင်လာသော သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကဏ္ဍအနက်မှ ဖြစ်သည်။ ပထမ။ လိင်တံထိပ်အရေပြားလှီးဖြတ်ခြင်း၊ ၎င်းကျန်ရှိနေခြင်းဖြင့်မသန့်သည့်အရာများ၊ အညစ်အကြေးများစုဝေးနေပြီး ရောဂါများနှင့်အနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒုတိယ။ အရှက်အင်္ဂါ ပတ်လည်ရှိ အမွေးအမျှင်များနှင့် ကျင်ကြီး၊ ကျင်ငယ်စွန့်ရာ ဒွါရနှစ်ခုပတ်လည်ရှိ အမွေးအမျှင်များကို ရိတ်ခြင်း၊ ၎င်းနေရာတွင် ထိုအမွေးအမျှင်များ ကျန်ရှိနေခြင်းဖြင့် အညစ်အကြေးများပေကျံမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အစ္စလာမ့်တရားလမ်းစဉ်က သတ်မှတ်ထားသည့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကို ပျက်ကွက်ရာရောက်သည်။ တတိယ။ နှုတ်ခမ်းမွေးညှပ်ခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းမွေးအရှည်ထားခြင်းဖြင့် ရုပ်ပျက်စေသည်။ နှုတ်ခမ်းမွေးရှိသူ သောက်ပြီးနောက် ကျန်သောအရာကို သောက်ရန်မနှစ်မြို့ကြချေ။ ၎င်းသည် မဂျူစီတို့နှင့်ဆင်တူအောင် ပြုလုပ်ရာလည်းရောက်သည်။ စတုတ္ထ။ လက်သည်း ခြေသည်းညှပ်ခြင်း၊ ၎င်းတို့အား မညှပ်ဘဲထားခြင်းကြောင့် အညစ်အကြေးများစုနေပြီး ၎င်းအညစ်အကြေးများသည် အစားအစာများနှင့်ရောနှောကာ ရောဂါဖြစ်စေသည်။ ဆေးကြောရန် ဖရဿ်ွဖြစ်သည့်နေရာသည် ၎င်းအညစ်အကြေးများ ဖုံးကွယ်နေသောကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုပြည့်စုံခြင်းကို အတားဆီးဖြစ်စေသည်။ ပဥ္စမ။ ချိုင်းမွေးနုတ်ခြင်း၊ ချိုင်းမွေးရှိနေခြင်းဖြင့် အနံ့ဆိုးများကို ဖြစ်စေသည်။
ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် စပိန် တူရကီ အုရ်ဒူ အင်ဒိုနီးရှား ဘော့စနီးယား ရုရှား ဘင်္ဂလီ တရုတ် ဖါရစီ(ပါရှန်း) တဂ္ဂလော့ ဟင်ဒီ ဆင်ဟာလီ ဝီဂါ ကာ့ဒ် ဟောက်ဆာ ပေါ်တူဂီ မလေးရာလမ် တေလဂူ ဆွာဟီလီ တမီးလ်
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ တရားတော်(အစ္စလာမ်)သည် ကောင်းမြတ်သည့်အရာများဘက်သို့ ဖိတ်ခေါ် ပြီး မကောင်းသည့်အရာများမှ ဝေးကွာစေသည်။
အရာငါးခုသည် လူသား၏ သဘာဝအနက်မှ ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြခြင်းသည် ၎င်းအရေအတွက်ဖြင့်သာ ကန့်သတ်ထားခြင်း မဟုတ်ပေ။ ၎င်းအရေအတွက် သတ်မှတ်ချက်သည် အဓိက အထောက်ထားမဟုတ်။ ဆွဟီးဟ်မွတ်စ်လင်မ်ကျမ်းတွင် ဆယ်ခုသောအရာသည် လူသား၏ သဘာဝအနက်မှ ဖြစ်သည်ဟုလာရှိသည်။
ဤအချက်များကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မေ့လျော့ခြင်း မရှိစေရန် ပြဌာန်းထားသည်။
ဤကောင်းမြတ်သော အကျင့်ငါးခုသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ တရားတော်(အစ္စလာမ်)မှဖြစ်သည်။ အရှင်မြတ်သည် ၎င်းအရာများကို နှစ်သက်တော်မူပြီး ပြုလုပ်ရန်လည်း အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းသည် အကျင့်စရိုက်ကောင်းရှိသူများ၏ အကျင့်ဖြစ်ပြီး ထိုစရိုက်ကောင်းများနှင့် ဆန့်ကျင်သူတို့ကသာ ၎င်းတို့အားမနှစ်မြို့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်သာသနာတော်သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း၊ လှပတင့်တယ်ခြင်း၊ ပြည့်စုံခြင်းတို့နှင့်တကွ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ဤအကျင့်ကောင်းများတွင် လောကီ၊ လောကုတ္တရာ နှစ်ဌာနစလုံး၏ ကောင်းကျိုးများရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက်အချို့မှာ ရုပ်ဆင်းလှပခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းမှုကို အလေးထားခြင်း၊ ကာဖိရ်တို့၏ အမှတ်အသားကို ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် ရှရီအသ်ကိုပြဌာန်းသောအရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်ကို လိုက်နာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ယခုခေတ် အချို့သောလူငယ်ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးတို့ပြုလုပ်ကြသောလက်သည်းရှည်ထားခြင်းနှင့် အချို့ယောက်ျားလေးများ ပြုလုပ်ကြသောနှုတ်ခမ်းမွေး အရှည်ထားခြင်းတို့သည် ရှရီအသ်၌ တားမြစ်ထားသော ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပြီး အသိဉာဏ်အရဖြစ်စေ၊ ယဥ်ကျေးသည့် အမူအကျင့်အရဖြစ်စေ မနှစ်သက်စရာပင်ဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်သည် လှပကောင်းမွန်ခြင်းကိုသာ အမိန့်ပေးပြီး စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာဟူသ၍ကို တားမြစ်ထားသည်။ အနောက်တိုင်းကို ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာ နောက်လိုက်ခြင်းသည် အရှိတရားများကို ပြောင်းလဲစေပြီး စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာကို လှပသည်ဟု ထင်စေသည်။ ယဥ်ကျေးသည့် အမူအကျင့်၊ အသိဉာဏ်နှင့် အစ္စလာမ့်လမ်းစဥ်တို့အရ လှပတင့်တယ်သောအရာကို ရွံရှာဖွယ်ရာအဖြစ် မြင်စေသည်။
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု။ . အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ စွန္နသ်တော်များ။ .
နှုတ်ခမ်းမွေးညှပ်ပါ၊ မုတ်ဆိတ်မွေးကို ရှည်လျားအောင် လွှတ်ထားပါ။
(မစ္စဝါက်) တံပူစားခြင်းသည် ခံတွင်းကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် နှစ်သက်တော်မူသည်။
عربي English Français Español Türkçe اردو Indonesia Bosanski Русский বাংলা ভাষা 中文 فارسی Tagalog हिन्दी සිංහල ئۇيغۇرچە كوردی Hausa Português മലയാളം తెలుగు Kiswahili தமிழ்
+ရှင်းလင်းချက် +အင်္ဂလိပ် +ပြင်သစ် +စပိန် +တူရကီ +အုရ်ဒူ +အင်ဒိုနီးရှား +ဘော့စနီးယား +ရုရှား +ဘင်္ဂလီ +တရုတ် +ဖါရစီ(ပါရှန်း) +တဂ္ဂလော့ +ဟင်ဒီ +ဆင်ဟာလီ +ဝီဂါ +ကာ့ဒ် +ဟောက်ဆာ +ပေါ်တူဂီ +မလေးရာလမ် +တေလဂူ +ဆွာဟီလီ +တမီးလ်